လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းအတွက်မကောင်းပါ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » အရိုးနဲ႔ၾကြက္သားက်န္းမာေရး » လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းအတွက်မကောင်းပါ
ရေးသားသူ Phyo Wai Yan ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
သင့်တွင်ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းရှိနေလျှင် လေ့ကျင့်ခန်းများဟာ ကုသရေးအစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ် ။ သို့သော်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးဟာတော့ သင့်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြမည့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့သင့်ရောဂါအခြေအနေ ပိုမဆိုးစေရန်နှင့် ပြန်မဖြစ်စေရန် မလုပ်သင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကို သင့်ရဲ့ကျောရိုး သို့ လည်ပင်းမှာ အရိုးအတက်ထွက်နေပြီဟု ပြောပါလိမ့်မယ် ။ ထိုအဓိပ္ပါယ်ကို သင်သေချာသိပါသလား ။ ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါ အရိုးပေါ်မှာ အရိုးပျော့လေးတစ်ခု ထပ်ထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းကို ကျောရိုးတွင်ရောဂါကြောင့် အတက်ထွက်လာခြင်းဟု သိနိုင်ပါတယ် ။ အဖြစ်အများဆုံးကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းတွေကတော့ လည်ပင်းနှင့် ခါး နေရာတွင် ကျောရိုးမကြီးအတက်ထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျောရိုးမကြီးအတက်ထွက်ခြင်းဟာ အသက်ကြီးလာလျှင်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာပြလေ့မရှိပါဘူး ။ အဆစ်များဒဏ်ဖြစ်ပြီး လည်ပင်းနှင့် ကျောရိုးရှိကြွက်သားများ ဒဏ်ရာရလျှင် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ။ အရိုးအတက်ဟာ အာရုံကြောများ ၊ အာရုံကြောမကြီး ၊ကျောရိုးနောက်ခံပြားများ သို့ ကျောရိုးမကြီးအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ သွေးကြောများကို ဖိမိသောအခါ ရောဂါလက္ခဏာများ ပြလာတတ်ပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့….
– အချိန်အကြာကြီး လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ သို့ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့အခါ ကျော သို့ လည်ပင်းတွင် နာကျင်ခြင်း ။
– အကယ်၍ လည်ပင်းရှိအာရုံကြောများပါ ထိခိုက်မိလျှင် ဦးခေါင်းနှင့် ပုခုံးများပါနာကျင်ခြင်း၊ခါးရှိအာရုံကြောများပါ ထိခိုက်မိလျှင် ပေါင်နေရာတွင်နာကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ် ။
– ရောဂါလက္ခဏာများဟာ သင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပိုဆိုးလာတတ်ပြီး အနား ယူလိုက်တဲ့အခါ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
– ပိုဆိုးတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ လက်များ ခြေများ နာကျင်ခြင်း ၊ ထုံနေခြင်း၊အားနည်းနေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
– ဆီးနှင့် ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်း ။
အရိုးအတက်ကို ပိုမိုဆိုးစေတဲ့အရာတွေကတော့ အာဟာရ ၊ နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်ကန်ခြင်း ၊အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သော ဒဏ်ရာများ ၊ မတော်တဆမှုများ စတဲ့ဒဏ်ရာများပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မလုပ်သင့်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ ။
မသင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ရောဂါကိုပိုဆိုးစေပါလိမ့်မယ် ။ အောက်ဖော်ပြမည့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ သင့်တွင်ကျောရိုးအတက်ထွက်ခြင်းရှိလျှင် မလုပ်သင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
– သင့်ရဲ့ခေါင်းပေါ် သို့ ပုခုံးပေါ်သို့ အလေးများ မမသင့်ပါ ။
– အိပ်ထမတင်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများအတွက်ကောင်းပေမယ့်သင့်ရဲ့ကျောရိုးနဲ့လည်ပင်းအတွက်မကောင်းပါဘူး ။ သင့်ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်လျှင် ပိုမိုနာကျင်စေပါလိမ့်မယ်။
– ဒိုက်ထိုးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုအရာဟာ သင့်ရဲ့ကျောနဲ့ပုခုံးတွေကိုနာကျင်စေပါလိမ့်မယ်။
– လည်ပင်းနဲ့ကျောကို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး လည်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုရှောင်ရှားရပါမယ် ။ သင့်ရဲ့ကျောရိုးကို တစ်ဖက်ထဲသို့ အကြိမ်ကြိမ် လှည့်၍လိန်ခြင်းမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူး ။ အခြားတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်တဲ့အခါနာကျင်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ် ။
– ပြေးခြင်း ၊ ဘတ်စကတ်ဘောကစားခြင်း စသည့် ကျောရိုးကို ဝန်ပိစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ရပါဘူး ။ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်ခြင်း သို့ ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်း စတာတွေဟာ ပိုပြီး အကျိုးရှိစေပါတယ် ။
– ခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကို ဇောက်ထိုးအနေအထားပြုလုပ်ခြင်းမျိုးမလုပ်ရပါဘူး ။ သင့်ပုခုံးကိုဝန်ပိစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာလည်း သင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။
– ပုံစံအနေအထားမှန်မှန်နေထိုင်ရပါမယ် ။သင့်ရဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံ သို့ မတ်တပ်ရပ်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲရပါမယ် ။ ထိုင်တဲ့အခါခါးကိုမတ်မတ်ထားပြီး လည်ပင်းကိုလည်း သက်တောင့်သက်သာပဲရှိစေရပါမယ် ။ လမ်းလျောက်တဲ့အခါ မျက်လုံးဟာ ရှေ့ကိုပဲကြည့်ပြီး ခေါင်းဟာလည်း ပုခုံနှစ်ခုံးကြားမှာတည့်တည့်ရှိနေ၍ ခါးကိုလည်း မတ်မတ်ထားပြီး လျှောက်ရပါမယ် ။
– သင့်ကိုပိုနာကျင်စေမယ့်အရာတွေကိုမလုပ်ရပါဘူး ။ ချက်ချင်းရပ်ရပါမယ် ။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာအကျိုးရှိစေပေမယ့် မသင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ ပိုဆိုးစေတဲ့အတွက်ရှောင်ရှားရပါမယ် ။ သင့်ဆရာဝန်မှမလုပ်ခိုင်းလျှင် သို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်မှုခံစားရလျှင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ရပါမယ် ။
Hello health group သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ပေးပါ ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
Bone Spurs (Osteophytes) and Back Pain. http://www.spine-health.com/conditions/arthritis/bone-spurs-osteophytes-and-back-pain. Accessed January 23, 2017.
Low Back Pain: What Can You Do?. http://www.webmd.com/back-pain/lower-back-pain-10/slideshow-exercises. Accessed January 23, 2017.
Treatment Options for Bone Spurs. http://www.spine-health.com/conditions/arthritis/treatment-options-bone-spurs. Accessed January 23, 2017.
Cervical Osteophytes: Bone Spurs in the Neck. http://www.spine-health.com/conditions/neck-pain/cervical-osteophytes-bone-spurs-neck. Accessed January 23, 2017.
Clinical Symptoms of Bone Spurs. http://www.spine-health.com/conditions/arthritis/clinical-symptoms-bone-spurs. Accessed January 23, 2017.